Wada sheekaysiga roulette.
Way fiicantahay in guriga la joogo ka dib maalin shaqo adag oo aan la sheekaysto dadkaas ku wada sheekaysanaya fiidiyowga qoob ka ciyaarka ee runtii aad u fiican oo doonaya in ay ka hadlaan mawduuc kasta. Laakiin sidoo kale waxaa dhacda inaadan runtii dooneynin inaad qof la xiriirto. Ka dibna sidee looga takhalusi karaa martida? Ama sida loo bilaabo wada hadalka? Iyo sida loo dhammeeyo? Guud ahaanna, xaggee laga heli karaa xiriiriyayaal istaahila? Dhamaan su'aalahan iyo kuwa kaloo badan waxaa kaaga jawaabi kara Chat Roulette. Wada sheekaysiga (roulette roulette) waa il gaar ah oo la abuuray si dadku u la xidhiidhi karaan dhibaato la'aan. Marka qof walbaa wuxuu helaa fursad uu ku doorto lammaane isgaarsiinta oo aad ku wada hadli kartaan oo aad ku dhameyn kartaan wadahadalka hadii wax aysan jecleyn. Dhamaan arrimahan iyo kuwa kale oo badan, wada sheekaysiga roulette ayaa ku imaan kara si waxtar leh. Tani waa adeeg caan ah oo dadka adduunka ku nool muddo sannado ah ku isticmaalayeen. Chatroulette wuxuu helayaa heer maalin kasta. Malaayiin rag iyo dumar, wiilal iyo gabdho ah ayaa aadaya macluumaadkan isla markaana wada xiriira. Waxay ku wada xiriiraan raaxo dartood, dartood inay helaan waayo-aragnimo isgaarsiineed, kulanka dartiis, ujeedo u helida saaxiibo iyo lamaane naftooda. Oo way ka farxisaa. Tag goobta oo la sheekeyso gabi ahaanba qof kasta. Waxaa jira, dabcan, xayiraad, laakiin wax yar uun ka dib. Hadda aan si dhow u eegno suurtagalnimada wada sheekaysiga qadka ah ee internetka.
Markaa, Chat Roulette wuxuu leeyahay qawaaniin u gaar ah iyo xannibaadaha. Isku soo wada duuboo, xeerarkani way fududahay oo waa macquul in la raaco. Laakiin aan aragno xeerarka aasaasiga ah. Markaa waa kuwan:
. Soo booqdayaasha wada sheekaysigu waa inay ahaadaan ugu yaraan 18 jir.
Kama wada hadli kartid sheekada dhexdeeda wixii sharcigu mamnuuc ka yahay.
Adeegyada galmada lama bixin karo.
, waxkasta oo laxiriira argagaxisada lama hormarin karo.
kuma aflagaadeyn kartid xiriiriyaha sabab kasta ha noqotee: jinsi, jinsi, danaha, iwm.
Mabda 'ahaan, kuwani waa qawaaniinta aasaasiga ah ee ay tahay in la raaco iyada oo aan lagu guuldaraysto. Intaas waxaa sii dheer, waxaa mudan in si xushmad leh loola xiriiro oo loo aqbalo is dhexgalka sida uu yahay. Chatroulette wuxuu sameeyaa dadaal kasta si loo hubiyo in booqdayaashu ay dareemaan kalsooni iyo raaxo xaalad kasta. Tan darteed, xeerarka ugu yar ayaa la abuuray kuwaas oo nolosha ka dhigaya mid ku habboon nolosha wada-hadalka dhammaan macaamiisha kheyraadka cajiibka ah Haddii aad raacdo qawaaniintaan, ka dib xiriirku wuxuu noqon doonaa mid lagu farxo. Kuwa wax kala dhex galaana waa ay qancin doonaan oo waxay soo bandhigi doonaan wada hadalka mar kale. Haddii xeerarka aan la raacin oo cabashooyinka isticmaaleyaasha kale la helo, markaa xisaabta isticmaale ee hela cabashooyinka oo ku xadgudba xeerarka sheekada ayaa laga horjoogsan karaa. Qof kasta oo isticmaala isticmaale 'roulette roulette' ayaa loo diri karaa xayiraadda haddii isaga ama iyadu ay jebiso sharciyada ay tahay in la ilaaliyo.Si aad u tagto sheekada lafteeda oo aad u bilowdo wada hadalka, waxaad u baahan doontaa waxyaabaha soo socda:
kumbuyuutar ama taleefan
Waadna xiriiri kartaa, sida ay yiraahdaan, googo' la'aan. Waxaad macno samayn kartaa waxkasta: qosol, kaftan, doodo, iyo guud ahaanba madadaalo la ciyaarista dadka aad jeceshahay. Tani waa waxa soo jiidata mashruuca Chat Roulette. Halkaan waxaad kula xiriiri kartaa oo keliya dadka run ahaanti wanaagsan oo aad rabto inaad la sii xiriirto. Faa'iidooyinka la istcimaalo chat roulette waa inaadan u baahnayn wax badan si aad ula xiriirto. Kaliya kombiyuutar ama taleefan ku habboon iyo internetka. Haa, wali waxaan u baahanahay makarafoon. Waana tan ugu fiican inaadan keydin. Ka dib oo dhan, makarafoon tayo wanaagsan leh ayaa ku siinaya fursad aad u wanaagsan oo si wanaagsan wax loo maqlo oo fikradahaaga u keen qofka aad is weydaarsaneysid cod macaan oo xiiso leh, iyada oo aan faragelin iyo waxyaabo kale oo faragalin ku sameyn kara tayada makarafoonka liita.
Isgaarsiinta barta internetka ee wada sheekaysiga qadka ee internetka had iyo jeer waxay keentaa farxad sababta oo ah in isticmaale kasta oo macluumaadkan leh uu fursad weyn u leeyahay inuu wax doorto. Laakiin inta udhaxeysa waxa la dooranayo, aan eegno. Marka, doorashada ayaa la samayn karaa:
inta udhaxeysa interlocutor
97 007 inta udhaxeysa safarka war-isgaarsiinta: lacag iyo bilaash
Inta udhaxeysa xiriirka caadiga ah iyo nooca Premium
Xulashada isdhaxgalka ayaa la bixin karaa ama waa bilaash. Tan waxaa lagu dejin doonaa ilo gaar ah oo uu adeegsaduhu u xusho gaar ahaan xiriirka. Kheyraadka qaarkood waxaa loo oggol yahay inay doortaan jinsiga qofka is-dhexgalka ee bilaashka ah, laakiin qaarkood looma oggola. Sidaa darteed, halkan waxaad u baahan tahay inaad fiiriso qawaaniinta iyo qolka tabeellaha wada hadalka.
Xulashada qaababka lacag bixinta iyo kan bilaashka ah waa iska cadahay. Mid kasta oo ka mid ah Wadahadalka loo yaqaan 'roulette roulette Chat', waxaad dooran kartaa mid ka mid ah qorshaha isgaarsiinta oo lacag ah ama bilaash ah. Waxa ugu muhiimsan halkan waa in la fiiriyo xulashooyinka la bixiyay midkoodna kiis kasta.
Xulashada udhaxeysa isgaarsiinta ee habka caadiga ah iyo nooca Premium ayaa sidoo kale lasiiyaa isticmaale kasta. Qaabka caadiga ah waxaa badanaa lagu bixiyaa bilaash. Laakiin Premium waa inaad bixiso. Qiimuhu sidoo kale wuu is beddeli karaa oo is beddeli karaa waqti ka dib.
Marka waxaa jira ikhtiyaar. Qof walbana adeegsade ayaa dooranaya naftiisa. Kheyraadka noocaas oo kale ah, waxaa sidoo kale loo soo bandhigaa ma aha oo keliya jinsi is-gaarsiinta, laakiin dalka aan jeclaan lahaa inaan la hadlo. Sidoo kale boggaga qaarkood xitaa waxaad dooran kartaa xirfadda ama danaha xiriiriyahaaga, iyo sidoo kale da'da iyo cabbirro kale. Kheyraad kastaa wuxuu ku xukumaa doorashadani siday u dooratay. Sidaa darteed, su'aashan waxay u baahan tahay in la caddeeyo ka hor intaadan iska diiwaan gelin kaydinta isla markaana aad go’aansato inaad khadka tooska ah kula xidhiidho soo-gudbiyaha tooska ah.Waxay ku soo baxaan khibrad. Dhaqanka isticmaalaha iyo qawaaniinta ayaa qeexaya shuruudahooda. Ma jiraan xayiraad aad u badan oo ku saabsan bogagga casriga ah, laakiin way jiraan. Tusaale ahaan, xannibaadaha da'da. Da'da adeegsadaha waa inuusan ka yarayn 18 sano.
Isticmaalaha waa inuusan u isticmaalin wada sheekeysiga qadka tooska ah ee internetka sida madal xayeysiis ah ama barta internetka lagu buufiyo. Tan ayaa mamnuuc ka ah xeerarka ku saabsan ilahaan badan. Tani waa wax la fahmi karo. Ka dib oo dhan, dadku waxay halkan u yimaadaan isgaarsiin, mana aha inay daawadaan xayeysiimaha ama ay u qaybiyaan spam.
Kheyraadka badan oo noocaas ah, wali waa mamnuuc in la xiro kamaradaha websaydhka si aysan u cadeyn cidda kula hadlaysa. Wajiga is dhexgalka waa inuu had iyo jeer muuqdaa. Laakiin xaaladaha qaarkood kamaadla xiriiri kartid kamarad websaydh, laakiin wadahadal iyo is-weydaarsi.
Chatroulette casri ah ayaa lagu soo booqan karaa qaab faa'iido u leh booqdaha. Waxaad ku isticmaali kartaa wada sheekaysiga nooca lacag bixinta ah ama bilaash ah. Markaad dooranayso nooca bilaashka ah, waxaad si fudud ula xidhiidhi kartaa qof kasta. Waxaad sidoo kale si sax ah u shidi kartaa, dami kartaa ama demi kartaa haddii wax qaldamaan. Laakiin qaar ka mid ah cabbiraadaha iyo faa'iidooyinka ayaa wali xaddidan markii aad booqatid wada sheekaysigan lacag la’aan.
Booqashada lacagta leh waxay siisaa fursado badan booqde kasta. Xaaladda lacag bixinta ayaa kuu oggolaaneysa inaad booqato bogga si qarsoodi ah qolka waraaqaha sheekaysiga qaarkood. Wadahadal qarsoodi ah ayaa loo abuuri karaa si gaar ah si markaa isticmaaleyaashu ugu xayeysiin muuqaalkooda muuqaalkan. Waxaa loo abuuri karaa ujeedooyin kala duwan. Iyo ulajeedooyin kala duwan. Booqashooyin lacag bixin ah, xulashooyin dheeri ah ayaa shaqeeya. Tusaale ahaan, ikhtiyaarka si loo abuuro xiriiriyaha aad jeceshahay. Si fiican ayey u shaqeysaa. Ka dib oo dhan, waa la ogyahay in wada hadalka roulette uu siinayo xulasho gebi ahaanba kala-wareegeyaal toos ah. Laakiin mararka qaarkood xiriiriyaha ayaa aad ugu faraxsan inaan rabo inaan sii wado la xiriirka isaga mustaqbalka. Ikhtiyaar mushahar leh ayaa suurtagal ka dhigaya in lagu daro kuwa aad jeceshahay iskuxidhayda liiska kuwa aad ku sii wadi karto wada xiriirka waqti kasta.
Intaa waxaa sii dheer, markaad bixinaysid wada sheekeysi, waxaa jira fursad kale: isgaarsiinta khaaska ah. Tan macnaheedu waa inaad la xiriiri karto qof gaar ah oo aad tan sameyso waqti dheer. Haddii aad jeceshahay wada hadalka, waad sii wadi kartaa intaas ka dib.
Shaqada "liistada madow" waxaa lagu heli karaa noocyada lacagta iyo midka bilaashka ah labadaba. Tani waxay si weyn u fududaynaysaa geedi socodka wada sheekaysiga labadaba qaab sheekaysiga iyo qaab muuqaal ah.
Faa'iidada ugu weyn ee kalfadhiga mushaharka waxaa sabab u ah xaqiiqada ah in qofku helo xuquuq badan oo mudnaan leh. Laakiin guud ahaan, haddii aad doorato isgaarsiinta xorta ah, qofna kama hor istaagi doono wada xiriirka. Taa baddalkeeda, hannaanka isgaadhsiinta laftiisu waxyar kuma dhici doono haddii uu bilaash yahay.Tusaale ahaan, kartida lagu doorto sheekada fiidiyowga iyo sheekaysiga. Haa, isticmaale kasta, iyada oo aan loo eegin lacag bixinta ama helitaanka lacag la'aanta ah ee kheyraadka, ayaa dooran kara sida uu u xiriiri doono. Oo u bixi xiriiriyahaaga sidan oo keliya. Ku sheekaysiga ama ku sheekaysiga qaab fiidiyowga waxay u horseedi kartaa dadka isticmaala inay yeeshaan saaxiibo cusub ama dad fiican oo hubaal ah inay ku dari doonaan shucuur cusub iyo khibrado cusub.
Laakiin marka lagu daro wada-xiriirka wanaagsan iyo dhex-dhexaadka cajiibka ah, wada-hadalka roulette waxaa lagu kala bixi karaa dhibaatooyinka qaarkood. Tusaale ahaan, qatar. Kuwa u yimaadda wada sheekaysiga roulette markii ugu horraysay waxay ku dhacaan adduunka kuwa yaqaanna fursadaha iyo fursadaha. Hadana bal aan aragno waxa ay tahay inaad fiiro gaar ah siiso marka aad la xiriireyso iyo waxa ay tahay in aad had iyo jeer u diyaarsanaato:
Marka ugu horeysa, Chat roulette waxay ku lug leedahay isbadal deg deg ah oo fudud oo wada-hawlgalayaasha wada-xiriirka. Taas macnaheedu waa inaad u beddelan karto qofka ku xiga taabashada badhanka. Way ka farxisaa. Laakiin isla waqtigaas, waxaa xusid mudan in sidoo kale si dhakhso ah looguugu beddeli karo qof kale oo ku beddelanaya. Sidaa darteed, tani waa mid mudan in la isu diyaariyo.
Wadahadal qarsoodi ah, qofna ma garanayo. Waxaad la imaan kartaa magacyo cusub, magacyo qoys, meesha aad dagantahay. Waad u adeegsan kartaa luuqad kasta wada xiriirka, in kasta oo ay jiraan wada sheekeysi isdaba joog ah oo loogu talagalay hal luqad. Tusaale ahaan Ingiriisiga. Ama Ruush. Inta badan adeegyadan waxaa loo sameeyay afaf aad u kala duwan. Sidaa darteed, halkan waxaad si amaan ah u ciyaari kartaa doorka ajnabiga.
chat roulette inta badan waxaa ku jira madadaalo, ma aha shukaansi dhab ah. Sidaa darteed, ha u qaadan adeeggan si dhab ah. Tani waa ugu horreyn adeegga adeegga madaddaalada, taasina waa sababta ay caan u noqotay. Halkanna ha u raadsanin aqoon-yarooyinka si aad u sii wadato. In kasta oo ay jiraan waxyaabo ka reeban. Gaar ahaan haddii aad doorato adeeg caan ah oo ka jira gobolkaaga ama xitaa magaalada.
Qiimaynta bilaashka ah ee '
dd' waxay soo jiidataa khiyaanooyin badan oo raba inay ka faa'iideystaan ​​isticmaaleyaasha aaminka ah. In kasta oo adeegga amnigu had iyo jeer u dhaqmayo una jawaabayo si dhakhso leh Chatroulette casri ah, fursadda lagula kulmo fadeexad wali waa mid aad u ballaaran.
Marka lagu daro khayaanada, waxaa sidoo kale jira noocyo kala duwan oo dad ah oo tusi kara qeybaha jirka qaawan. Waa lagu ciqaabi karaa mamnuuc, laakiin waxaad wali la kulmi kartaa shaqsiyaadkaas. Xaaladdan oo kale, waxaad si fudud u qori kartaa cabasho ama guji badhanka ku habboon.
Wada sheekaysiga casriga ah maanta wuxuu soo jiitaa dad badan. Way fiicantahay, laakiin dhinaca kale, fursadda lagula kulmo shakhsiyaadka aan ku filnayn ayaa kordhaya. Jihada kaftanka ficil iyo kaftanka kaladuwan ayaa iyaduna caan noqotay. Tusaale ahaan, iibsadayaashu waxay doorteen isweydaarsiga sheekaysiga waqti dheer kahor. Una isticmaal si aad caan u noqotid.Sida loo aqoonsado prankster-ka markii aad la hadlaysid Anti-Chat ama wixii kale oo ah sheeko wada hadal ah? Laga soo bilaabo markii ugu horreysay way adkaan kartaa, laakiin wali waa macquul in la sameeyo. Halkan waxaa ku yaal qodobbada qaar oo lagu aqoonsado dukaameeyeyaasha
Dharka aan caadiga ahayn ayaa laga yaabaa inay bannaanka soo dhigaan. Sida caadiga ah, waxay abuuraan fiidiyow madadaalo oo si taxaddar leh ayey ugu diyaar garoobaan. Dharkooduna had iyo jeer waa farshaxan yihiin oo aan caadi ahayn. Dharku waa inuu ku dhexjiraa dhexdhaxalaha si nacasnimo ah ugu dhawaan inta u dhexeysa qeybta labaad ee wada xiriirka. Sidaa darteed, haddii aad horjooge hortiisa ku haysato maaskaro ama dhar sharrax leh, markaa tani waxaay noqon kartaa boob-wade. Adigana kaliya ayaa go'aan ka gaari kara inaad la sii xiriirto isaga ama in aadan dooneynin qof kale.
kaftanka ayaa loo duubay madadaalo iyo daneynta awgeed. Pranker wuxuu noqon karaa mid dagaal badan ama, geesinimo leh, aad u qurux badan. Wuxuu sameyn karaa shay si cad u khilaafsan guud ahaan caadooyinka aqlaaqda.
ujeeddadoodu waa inay duubaan shucuurta iyo falcelinta dhaqankooda. Waxay iskudayaan tan oo waxay isku dayaan habab kala duwan. Laakiin farqiga ugu weyn ee dhexyaallayaasha caadiga ahi waa inay sameynayaan wax u horseedda caadifad xoog leh xiriiriyaha: yaab, xanaaq, qosol, ceeb iyo dareemo kale oo xoogan.
Wada sheekaysiga casriga ahi waa hab casri ah oo loogu talagalay dadka casriga ah. Haddii aadan haysan waqti aad kula xiriirto dadka, haddii aad ka xishoonaysid inaad la xiriirto dadka kale, haddii aadan aqoon sida loogu dhaho maya xiriiriyahaaga, ka dib wada hadalka roulette wuxuu noqon doonaa meel wanaagsan oo lagu tababaro. Halkan waxaad ku baran kartaa inaad ku bilowdo wada hadal lala yeesho gebi ahaanba dadka aadan aqoon. Halkan waxaad si fudud ula xiriiri kartaa kuwa jeclaaday. Oo jooji inaad la xiriirto kuwa aan jeclayn. Waxa ugu weyni waa in aad u dhaqanto aadanaha isla waqtigaas, aad noqoto qof wada sheekaysanaya oo faraxsan oo xusuusnow in dhinaca kale ee shaashadda dadkuna sidoo kale yihiin. Ayaa sidoo kale u yimid Chat roulette si uu kuugu raaxeysto oo ugala hadlo wax kasta oo adduunka ka jira.